Guddoomiyaha Filibiin SEC hoorsato daneeyayaasha crypto’ -celin ku saabsan xeerarka
The Philippines 'jaangooyaha suuqa, Guddiga Securities and Exchange ah, oo raadinaya ra'yiga ee crypto iyo blockchain “daneeyayaasha” si ay u caawiyaan hay'adaha dawladda ee qoritaanka xeerarka ku haboon meesha bannaan ee.
Guddoomiyaha SEC Ephyro Luis Amatong ka hadlay shir of Association Philippine Ganacsiga iyo Warshadaha Digital baahsan, oo wuxuu ku yidhi:
"Dawladda ayaa rabta in ay hortag in la abuuro sharciyo ku saabsan cryptocurrency. Waxaan rabnaa in aan ka qayb daneeyayaasha oo dhan adoo waydiinaya aad warcelin. Ma rabno, in la mamnuuco wax kaliya sababtoo ah ma fahmin. Taasi waa sababta celintaada iyo iskaashiga aad muhiim u yihiin si aan u fuuli karaan sharcigaan ku haboon oo ku saabsan ganacsiga cryptocurrency. "
siyaasiyiinta Colorado ee ugu dhakhsaha badan aqbali karin ku darsaday crypto
Dawladdu waxay of Colorado ugu dhakhsaha badan loo ogolaan karin in guddi siyaasadeed si ay u aqbalaan darsaday in cryptocurrency.
The Office of Xoghayaha Colorado ee State daabacay qabyada ah ee shaqada cusub ee ay “Xeerarka ku saabsan Ololaha iyo Maaliyadda Siyaasadda” taas oo gaar ahaan ka mid ah qaybta cusub deeqaha cryptocurrency.
The dalalka hanuun soo jeediyay:
“Guddi aqbalo darsaday in cryptocurrency, ilaa xadka la aqbali karo lacag caddaan ah ama qadaadiic qaaraan. Inta ay ka qayb qaateen waa qiimaha cryptocurrency ah waqtiga ku darsadeen. Guddiga waa inay soo sheegaan faa'iido ama khasaare ka dib markii tabarruca uu dakhli kale ama rasiidhada.”
Russia & Iran isku raacsan yihiin in cryptocurrencies waxaa loo isticmaali karaa si looga fogaado deg deg ah iyo sidoo kale cunaqabatayn
madaxa Irans ee arrimaha dhaqaalaha, Mohammad Reza Purebrakhim, ku tilmaamay isticmaalaya lacag digital sida loola jeedaa in ay ka saameynta ay dollar sida a baxsadaan “jihada ididiilo.”
Tani waxaa hadlay kulan uu la yeeshay madaxa Guddiga Golaha Federation Ruush ah oo ku saabsan dhaqaalaha Policy Dmitry Mezentsev ay labada Russia iyo Iran tilmaamay crypto sida isagoo bedelkiisa nidaamka lacag-bixinta isku xidhka dheereeya, isticmaalka kaas oo sidoo kale uu wiiqi doonto wax kasta oo cunaqabatayn lacageed lagu soo rogay dal, samaynta Russia kaashanaya Iran ku saabsan faa'iidooyinka isticmaalaya crypto.
CoinGate in aan bilowno Seeraar hillaac Network processing bixinta
adeegga Payment processor CoinGate ayaa bilaabay jirrabaya hillaac Network.
Shirkadda ayaa rajo ka qaba in uu noqdo processor ugu horeysay ee lacag bixinta si ay u aqbalaan lacagta lihida xaaladaha live.
sawfish ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 28, 2018 at 1:46 PM
shermano ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 28, 2018 at 7:55 PM
Fit ayaa sheegay in: